मोटोपनले सतायो ? घरमै बनाएर यो जुस पिउँनुहोस् त्यसपछि स्लिम - Internet Khabar
मोटोपनले सतायो ? घरमै बनाएर यो जुस पिउँनुहोस् त्यसपछि स्लिम
November 5, 2018 December 9, 2018 Internet Khabar
एजेन्सी । आधुनिक जीवनशैलीमा मोटोपनाले सबैलाई सताएको छ । मोटोपना घटाउनको लागि मानिसहरु शारीरिक अभ्यास देखि विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । तर शारीरिक काम भन्दा मानसिक काम बढी गर्नुपर्ने आजको समयमा मोटोपना घटाउनु एकदमै गाह्रो बनिरहेको छ । मोटोपना घटाउन चाहने व्यक्तिले बाहिरको खाना नखाने तथा हरियो सागसब्जी र फलफूल बढी खानु आवश्यक हुन्छ।
मोटोपना घटाउनको लागि घरेलु सामग्रीबाट तयार गरिने एउटा जुस प्रभावकारी मानिन्छ । उक्त जुस तयार गर्नको लागि निमको पात, अदुवा, इलाइचि, धनियाँ, सौफ, अमला, दालचिनी र लसुनको आवश्यकता पर्छ । धनियाँ जरा संगै नै लिनुपर्छ।
जुसको लागि सुरुमा एउटा भाँडोमा पानी तताउनुपर्छ । पानी तातिसकेपछि त्यसमा सबै कुरा हालेर उमाल्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो पानीलाई केही छिन सेलाउन दिनुपर्छ र त्यसबाट उमालेका सबै सामग्री छानेर मिक्सरमा मिक्स गर्नुपर्छ । अब त्यो पेस्टलाई पनि त्यही पानीमा राख्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो पानीलाई छानेर पिउनुपर्छ । यो जुस एकैपटक धेरै बनाएर फ्रिजमा राख्न पनि सकिन्छ।
यो जुसलाई बिहान उठ्ने बितिकै खाली पेटमा पिउनुपर्छ । यसको साथै यो जुसलाई दिउँसो खानाको समय पछि पनि पिउन सकिन्छ। खाना पछि पिउँदा खाना खाएको ४५ मिनेट पछि मात्र पिउनु राम्रो मानिन्छ । यो जुस लगातार रुपमा एक महिना सम्म पिउनाले शरीरको मोटोपना धेरै मात्रामा घट्छ । यो जुसले मधुमेहका रोगी, जोर्नी दुख्ने रोगीहरुलाई पनि राम्रो गर्छ । यसको साथै, यो जुसको सेवन गर्नाले अनुहार तथा कपालको सौन्दर्यतामा निखारता आउँछ।
November 5, 2018 December 9, 2018
श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन
January 29, 2018 October 23, 2018
आफ्नो शरीर सधै स्लिम राख्न अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
January 24, 2018 August 23, 2018
जानी राख्नुहोस् कागती पानी सेवनका १० फाइदाहरू
उँखुको जुस खानुका १० फाइदा